Ku soo dhowow guriga DutchtownSTL gurigiisa dhammaan waxyaabaha Marquette Park. Waxaan kugula socodsiin doonaa wixii ku soo kordha jardiinada, Marquette Recreation Center, Field House, iyo Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada.
Waxay ku taalaa qaybta waqooyi ee Dutchtown, Marquette Park waxay ku fadhidaa 17 hektar oo mara jidka Compton Avenue ee u dhexeeya Osage iyo Gasconade Streets. Waa baarkinka ugu weyn aagga Greater Dutchtown. Beerta waxaa la aasaasay 1915 oo ku taal goobtii hore ee agoonta Guriga Qaxootiga.
We dhawaan iftiimiyay qaar ka mid ah waxqabadyada cajiibka ah ee ay bulshada wadeen iyo horumarka ka dhacaya Marquette Park. Waxaan sidoo kale la kulannay caqabado badan, kuwaas oo aan sidoo kale ka doodno. Laakiin horumar ayaa la sameynayaa, xagaaga 2021 wuxuu waqti fiican ku ahaa Marquette Park. Akhriso maqaalkeena on BlogtownSTL Blog.
Xarumaha Marquette Park iyo Adeegyada
Marquette Park waxay hoy u tahay barkadda dabaasha dadweynaha ee ugu weyn dhinaca Koonfureed. Barkadda ayaa dib loo hagaajiyay oo dib loo furay xagaagii 2015. Dhawaanahan, Isbahaysiga Marquette Park, koox ku xidhan DT2 • Downtown Dutchtown, ayaa leh waxaa loo aruuriyay $ 7,000 oo loogu talagalay alaabta guriga ku cusub barkadda. Waxay sidoo kale u ololeeyeen saraakiisha magaalada inay ka saaraan siligga xayndaabka hareeraha barkadda si kor loogu qaado jawi soo dhawayn badan.
Kubadda Cagta ee Marquette Park
Goob kubbadeed oo baaxad leh ayaa ku taal qaybta galbeed ee baarkinka. Sabtiyada iyo axada, kooxo badan oo ciyaartoy ah oo ka kala socda daafaha dunida ayaa la wareega garoonka qaar ka mid ah tartamada aan rasmiga ahayn. Xilliga dayrta, City Rec League waxay u shaqaysaa barnaamijyada kubbadda cagta ee dhalinyarada xaafadda. Allies of Marquette Park waxay ka shaqeynayaan sidii loo horumarin lahaa iskaashiyo lagu horumarinayo tayada xarumaha kubbadda cagta iyo ku dhiirrigeli kubbadda cagta Marquette Park.
Guriga Marquette Park
Dhawaan dayactir, Marquette Park Field House oo taariikhi ah wuxuu fadhiyaa buur ku taal dhinaca galbeed ee baarkinka. Guriga Field waxaa lagu kireysan karaa dhacdooyinka adoo wacaya Waaxda Baarkinka ee St. (314) 289-5300.
Waxay ku taal geeska koonfur-bari ee baarkinka Gasconade iyo Minnesota, Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada waxaa la aasaasay baarkinka 1991. Thomas Dunn wuxuu bixiyaa fasalo iyo nashaadaad da 'kasta leh, wuxuu bixiyaa istuudiyaha farshaxanka furan, jikada banaanbaxa, maktabada, iyo sheybaarada kombiyuutarka. Waad heli kartaa fasallo iyo dhacdooyin ka dhacay Xarunta Waxbarshada ee Thomas Dunn halkan DutchtownSTL.org.
Xarunta Marquette Rec, oo ku taal dhinaca bari ee jardiinada u jeedda Minnesota Avenue, waxaa ku yaal goob jimicsi oo gudaha ah oo leh garoonnada kubbadda koleyga, iyo sidoo kale qolal firfircoon iyo qolka labiska barkadda. Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada iyo Golaha Dhallinyarada ee Koonfurta ayaa dhowaan iskaashi la furay si loo furo The Place, oo ah xarun lagu daweeyo dhallinyar oo ku taal dabaqa sare ee Xarunta 'Rec Center'.
Marka lagu daro dhammaan qurbaannadii kor lagu soo sheegay, Marquette Park waxaa ku yaal saddex maxkamad tennis, dheeman kubbadda jilicsan, iyo garoon ballaaran. Xarumo madadaalo oo badan ayaa ku jira shaqadii. Beerta ayaa sidoo kale bixisa meelo badan oo lagu nasto, iyadoo kuraasta ay ku xardhan yihiin hareeraha iyo meel cagaaran oo ballaaran oo ku baahsan 17 hektar. Buurta ku dul taal Guriga Field wuxuu bixiyaa aragtiyo cajiib ah oo ku saabsan Dutchtown.
Dhacdooyinka Bulshada ee Marquette Park
Xilliga kuleylaha, DT2 iyo kafaala-qaadayaal kale ayaa keena Habeenada Filimka Dutchtown qoysaska deriska ah shaashad weyn oo 22-foot ah la buufin karo. Deriska ayaa ku faafay buurta horteeda Field House-ka si ay u helaan agabyada bulshada, ugana qaataan cunnooyinka fudud xirmooyinka cuntada, waxayna ka qaataan filim qoys saaxiibtinimo ku habboon mugdi.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Habeenada Filimka Dutchtown ee jardiinada iyo meelaha kale ee xaafadda ah, booqo dutchtownstl.org/movienight.
Bandhig Faneed Caan ah
Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown waxay martigalisaa Bandhig Faneedka Caadiga ah ee baarkinka deyr kasta. Bandhigu wuxuu ka kooban yahay muusig iyo qoob ka ciyaarka adduunka oo dhan, oo ay weheliyaan raashin iyo iibiyeyaal ka kala socda daafaha dunida. Bandhigga sanadlaha ah wuxuu leeyahay jawi xafladeed oo xannib ah, oo xiraya Wadada Compton Avenue ilaa bartamaha baarkinka.
Xagaaga walba Maalinta Bulshada Marquette waxay marti-galisaa dhacdo xiiso leh oo ku-noqoshada dugsiga Marquette Park, oo bixisa boorsooyinka dhabarka, sahayda dugsiga, timo-jarista, iyo waxyaabo kaloo badan si loogu diyaariyo carruurta Koonfurta Side sannad dugsiyeedka cusub. Munaasabaddu waxay sidoo kale bixisaa madadaalo badan, oo leh qalcado boodbood, faras fuushan, muusig nool, iyo dubbe. Akhri wax walba oo ku saabsan Marquette Maalinta Bulshada halkan balooggeenna.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay August 26th, 2021 .
DutchtownSTL.org Beerta Marquette